काठमाडौँको कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाब लड्दैछन् रवि लामिछाने ? | ७प्रदेश.com
Homeराष्ट्रीयकाठमाडौँको कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाब लड्दैछन् रवि लामिछाने ?
ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा सिधा कुरा कार्यक्रमका सञ्चालक पत्रकार रवि लामिछानेले टेलिभिजन छाडेका छन्। टेलिभिजनबाट औपचारिक बिदाइ कार्यक्रम भयो, लामिछानेले भने, आज मेरो अन्तिम एपिसोड प्रशारण हुनेछ, ह्याण्डओभर कार्यक्रम गर्दैछु। लामिछानेले आफूले राजनीतिमा लाग्ने निधो गरेको समेत बताए।
उनले कुन राजनीतिक दलबाट आफू उम्मेदवार बन्न लागेको भन्ने खुलाएनन्। म भोलिदेखि सरसल्लाह गर्नेछु। आउँदो असार ७ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा कार्यक्रम गरेर कस्तो राजनीति र कुन क्षेत्रबाट लड्ने लगायतका विषयमा प्रष्ट पार्छु, लामिछानेले भने, मलाई धेरै राजनीतिक दलबाट प्रस्ताव आएको छ। तर मलाई अहिलेका राजनीतिक दलहरूमा त्यतिधेरै चासो छैन।
तर म सल्लाहको चरणमा छु। उनले आफू स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिमा लाग्ने सोचमा समेत नरहेको बताए। एक्लै स्वतन्त्र जाने सोच छैनु, लामिछानेले भने, बरू भएका स्वतन्त्रहरूलाई जोड्ने योजना बनाउँदैछु।
लामिछाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट चुनाव लड्ने अड्कलबाजी समेत भइराखेको छ। लामिछानेका ससुरा उद्दव पौडेल केहीदिन अघि मात्र कमल थापाको पार्टीबाट राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपामा फर्किएका थिए। पारिवारिक सम्बन्धका कारण उनी राप्रपाबाट चुनाव लड्ने अड्कलबाजी चलिरहेको छ।
लामिछानेले भने पारिवारिक सम्बन्धको प्रश्नलाई खारेज गरे। त्यो उहाँको ससुरा निर्णय भयो लामिछानेले भने, मेरो न कुनै दबाब हुन्छ। न प्रभाव हुन्छ। उहाँले हामीसँग कुरा गर्दा म राजावादी हुन सक्दिँन भन्नुभएको छ। यत्रो परिवर्तन नआएको भए म जन्मँदै जन्मिने थिइनँु भन्नुहुन्छु, उनीनिकट ती पत्रकारले भने, उहाँ काठमाडौंको क्षेत्र नं ३ बाट चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ।
ती पत्रकारका अनुसार लामिछानेको मतदाता नामावली समेत काठमाडौंको क्षेत्र नं ३ मा रहेको छ। त्यसो त उनले काठमाडौंको क्षेत्र नं २ बाट समेत निर्वाचन लड्ने विषयमा विचार गरिरहेको ती पत्रकारले बताए। काठमाडौंको क्षेत्र नं ३ मा राष्ट्रियस्तरको नेता नभएका कारण आफ्ना लागि सहज हुने लामिछानेले आकलन गरेको ती पत्रकारले बताए।
Previous articleके बालेनले जसरी चुनाव जितेर चमत्कार गर्लान् त राजेशले पनि ?
Next articleसङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पछिसम्म पनि गठबन्धन रहन्छ : अध्यक्ष दाहाल « News24 : Premium News Channel